USolwazi Donal McCracken obhale incwadi: Nicholson: How an Angry Irishman became the Hero of Delhi, ngempilo ka-John Nicholson isosha lase-Ireland.
Isifundiswa SezeSintu Sishicilele Incwadi Ngomlando WamaNdiya
Incwadi yeSazi Somlando nofundisa e-UKZN uSolwazi Donal McCracken ethi Nicholson: How an Angry Irishman became the Hero of Delhi, kuthathe iminyaka eyi-12 ukuyibhala kanti imuhambise eNdiya, e-Ireland naseBrithani.
Ishicilelwe yi-History Press of Ireland, kanti iyincwadi ngempilo ka-John Nicholson isosha lase-Ireland elayibamba empini yasemngceleni waseNyakatho-Ntshonalanga ngeminyaka yezi-1840s kuya kweyezi-1850s endaweni esibizwa nge-Pakistani namuhla. U-McCracken uchaza u-Nicholson ngokuthi: ‘Wayewundabizekwayo, abanye babemthatha njengeqhawe kuthi abanye bemthatha njengosathane (omunye umlobi umbiza ngohlanya lomuntu owayesebenzela ukwanda kombuso wamaNgisi). Ngizamile ukungachemi namuntu, ngazichitha izindaba eziningi ezixoxwa ngaye, ngagxila embhalweni wemithombo yokuqala, iningi layo ligcinwe egunjini lamagugu ase-Afrika nawase-Asia e-British Library e-London.’
Ngokuka-McCracken, indaba ka-Nicholson ’iQhawe lase-Delhi’ isaxoxwa namanje. ‘Ngale kwendaba yesithixo saseNdiya eyabe ilokhu imlandele, ekhaya waduma njengeqhawe, wavezwa ezindabeni zezingane zomlando, wenza iningi labafana lafisa ukuba ngamasosha. Muva nje, iqhawe lenziwe usathane kodwa futhi abanye bamthatha njengomkhuzi wamasosha ovelele wesikhathi seNdlovukazi u-Victoria’, kusho yena.
U-Nicholson wazalelwa e-Dublin ngo-1822, wakhula, wafunda e-Ireland. Wangena embuthweni i-Bengal Army ngaphansi kwe-East India Company eneminyaka eyi-16 wayibamba e-Afghanistan, kuma-Anglo-Sikh amabili ne- Great Rebellion noma i-Mutiny. Wafa ibambene eneminyaka engama-34 mhla impi yaseBrithani ayewumkhuzi wayo igasela edolobheni lakudala i-Delhi ngoMandulo wangowezi-1857.
‘U-Nicholson wayenenhliziyo encane, okwakubangwa "amaphilisi aluhlaza” ayewadla (njengo-Abraham Lincoln) ayene-mercury, ayemenza abe neconsi. Wayedume ngesihluku, okuyinto okuvunyelwana ngayo. Wayethanda ukuzihlalela namasosha amaNdiya kunamasosha amhlophe akubo futhi wayenabalandeli benkolo (i-Nikkol Seinee) eyayimkhonza njengonkulunkulu uqobo. Cishe wayewumkhuzi oseqophelweni eliphezulu kodwa futhi ewumuntu oyindida, ongaqondakali,’ kusho u-McCracken.
Incwadi itholakala kubashicileli noma ingathengwa e-Amazon.
I-Royal Geographical Society Ihloniphe UsoSayensi Ovelele wase-UKZN
Education Students Give Back
One Man Can Discussion on Gender-Based Violence
Framework Aims to Improve Delivery of Health Services
Iqembu Labathathu Lezamaciko Ligqugquzela Ezamabhizinisi
Academics Participate in International Workshop and Panel Discussions on Privacy and Cybersecurity for Educational Institutions